Fianakaviana An’arivony No Terena Hiala Ny Tranony Noho Ny Tohodrano Sardar Sarovar Ao India · Global Voices teny Malagasy
Fianakaviana An'arivony Terena Hiala Ny Tranony Noho Ny Tohodrano
Voadika ny 14 Aogositra 2017 7:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, English
Ny tetikasa tohodrano goavana Sardar Sarovar namboarina tamin'ny taona 2008. Sary avy amin'i Reinhold Behringer tao amin'ny Flickr. CC BY-NC-SA 2.0
Nilaza ny governemanta fa fianakaviana eo amin'ny 18.000 eo no voakasika, ary 6724 no miaina ao amin'ny faritra ho dibo-drano, na dia mihoatra aza ny isa nolazain'ireo mpikatroka sy mpampianatra ambony izay miampanga ny manampahefana ho tsy miraharaha ny isa mba hampihena ny vola lany sy hisorohana fifandirana.
Fantatra fa tokony omena “onitra” ireo mponina, anisan'izany ny onitra noho ny fahaverezan-tany sy ny fametrahana azy ireo amin'ny trano vaovao. Na dia izany aza, maro ireo nandà tsy hiala ny tanànany, mitaraina fa ambany loatra tsy ara-drariny ny onitra ary tsy misy rano madio fisotro, fidiovana, tobim-pahasalamana fototra, sekoly, herinaratra ary arabe mihitsy aza ny toerana hamindràna azy ireo.
Ny tena tanjon'ny tetikasa tohodrano Sardar Sarovar ataon'ny fanjakana dia ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny rano sy famatsian-drano fisotro ary fitarihan-drano ao amin'ny fanjakana ao Gujarat, Madhya Pradesh ary Maharashtra.
Saingy hatramin'ny nanombohan'ny fanamboarana tamin'ny taona 1987, nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa hitondra voka-dratsy ho an'ireo olona ao an-toerana izany. Efa nanaiky hanome famindramam-bola 450 tapitrisa dolara tamin'ny 6 miliara dolara ilaina amin'ny tetikasa ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny voalohany, saingy nanaisotra ny famatsiam-bola tamin'ny taona 1993 noho ny tsikera sy fanoherana goavana. Najanona nandritra ny fe-potoana maharitra tamin'ny taona 1995 ka hatramin'ny taona 1999 ny asa noho ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Tampony, saingy natomboka indray taorian'izay.
Nandritra ny taona maro, nitombo tsikelikely ny haavon'ny tohondrano nokasaina atao, raha 80 metatra izany teo aloha dia nampitomboina ho 138,68 metatra ankehitriny. Midika izany fa hisy fiantraikany amin'ny olona maro be kokoa ny tohodrano. Nisioka lahatsary Google Earth nataony mba hanehoana ny faritra ho dibo-drano ilay mpandraharaha ara-tsosialy Siddharth Agarwal:
Maro amin'ireo namako no tsy mahafantatra momba ny @NarmadaBachao Tohodrano Andolan & Sardar Sarovar. Nampiasa ny Milina Earth ao amin'ny Google hampisehoana ny faritra dibo-drano:
Tamin'ny volana Febroary 2017, nanome baiko ny Fitsarana Tampony fa ho vitaina ao anatin'ny telo volana ny fanomezana onitra ho an'ny fianakaviana voakasika, ary tsy maintsy mandao ny lohasaha amin'ny 31 Jolay. Tamin'ny 17 jona 2017, nanome alalana ho an'ny governemanta Gujarat mba hanakatona ny vavahadin'ny tohodrano Sardar Sarovar ny Manampahefana Mpanaramaso an'i Narmada, mahatonga ny tetikasa ho feno “amin'ny fomba ofisialy”.
Kasaina atao amin'ny 12 Aogositra 2017 ny fitokanana lehibe ataon'ny Praiminisitra Narendra Modi amin'ny tetikasa Tohodrano Sardar Sarovar ao Gujarat, ary fantatra fa ho feno rano amin'ny faran'ny volana Aogositra ny tohodrano, mahatonga ireo faritra midadasika ho dibo-drano. Nandefa vaovao farany tao amin'ny Twitter ny lehiben'ny minisitra ao Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan:
98% ny asa fanorenana ao amin'ny toeran'ny Tohodrano Sardar Sarovar no vita. 12.500 amin'ireo fianakaviana 18.023 no niala ny faritra voakasika.
Terena hiala ny faritra ankehitriny ireo fianakaviana mbola mijanona ao amin'ny toerana
Mitarika ny fiarovana ireo fianakaviana niharam-boina ireo ny Narmada Bachao Andolan (NBA), vondron'olona tompotany, tantsaha, mpiaro ny tontolo iainana sy mpikatroka ny zon'olombelona izay telopolo taona nandavàna ny fametrahana tohodrano midadasika manerana ny Renirano Narmada.
Tamin'ny 27 Jolay 2017, nanomboka nanao fitokonana tsy hihinan-kanina tsy voafetra tao amin'ny distrika Dhar ao amin'ny fanjakana Indiana Madhya Prades i Medha Patkar sy mpikatroka hafa am-polony avy ao amin'ny NBA mba hitakiana onitra sahaza sy fanarenana ho an'ireo voakasika.
Na izany aza, tamin'ny andro faha-12n'ny fitokonana tsy hihinan-kanina, tamin'ny 7 Aogositra, noterena hiala tao amin'ny toeram-pihetsiketsehana i Patkar ary nafindra tany amin'ny hopitaly iray ao Indore.
Taorian'ny fanapariahana polisy, daroka, sy fandravana ny pandal, nosamborin'ny polisy i @medhanarmada, tsy nokitihana kosa ireo mpanao fihetsiketsehana 12 ambiny mifady hanina.
Mpikatroka ara-tsosialy Medha Patkar. Sary avy amin'i Joe Athialy tao amin'ny Flickr. CC BY-NC 2.0
Manana mpitsikera ny Patkar sy ny NBA, nilaza ireo mpitsikera fa manohintohina ny fampandrosoana lehibe ao India izy ireo.
Tokony hiakatra fitsarana i #MedhaPatkar noho ny andraikiny amin'ny hetsika manohitra ny firenena izay miteraka sakana amin'ny fampandrosoana an'i India.
Nanome baiko ny fanesorana ny fidirana TSY ARA-DALANA ao akaikin'ny tohodrano Sardar Sarovar ny SC (Fitsarana Tampony). Nahoana i Medha Patkar no lazaina fa “mpikatroka ara-tsosialy”?
Misy ihany koa ireo fandotoan-dresaka antserasera izay toa miseho fa anisan'ireo niharam-boina amin'ny tohodrano ary misaotra ny governemanta noho ny fanomezana toeram-ponenana, hafahafa fa hafatra mitovitovy hatrany no miseho.
Jereo ny fomba famoronan'ny BJP fironana faikany ao amin'ny twitter mikasika ny Tohodrano Sardar Sarovar
Nitokona tsy nihinan-kanina 13 andro i Medha Phatkar.
Tokony hamotsotra azy i Shavraj.
Nikarakara fihetsiketsehana manokana ihany koa ny olona ao amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena ho fanehoana firaisankina
Nanatontosa fihetsiketsehana tao Jantar Mantar ireo mpanohana ny #Narmada ho firaisankina amin'i #MedhaPatkar sy ny vahoakan'i #NarmadaValley manao Fifandian-kanina Faobe Tsy Voafetra
#MadhyaPradesh: ‘Jal Satyagrah’ avy amin'ireo mponina ao an-toerana (nafindra toerana) ao amin'ny renirano Narmada manohitra ny Tohodrano Sardar Sarovar, ao Rajgha, Barwani
Tamin'ny 8 Aogositra, nolavin'ny Fitsarana Tampony ny fitarainan'ny NBA mitady fanalavam-potoana amin'ny daty farany 31 Jolay mba hananerana ireo fianakaviana voakasiky ny Tohodranon'i Sardar Sarovar. Amin'izao fotoana izao, toa ireo Indiana monina ao amin'ny faritra dibo-drano no voakasiky ny fanerena fandroahana ao amin'ny tranon'izy ireo.